Trojan.Agent / Gen-VBKrypt - Khabiirka Cimiladu wuxuu sharxayaa sida looga saaro si dhamaystiran
Trojan.Agent / Gen-VBKrypt sida magaca soo jeedo waa faras trojan ah. Kumanaan qof oo isticmaala PCayaa ka cawdeen in ay qaadeen infekshanka. Kama takoori haddii PC-duagu uu ku shaqeynayo Windows ama Windows. Sidaa ayuu sameynayaawaxaad ku aragtaa inay ku furtay diiwaankaaga? Waa hagaag, waxay ku xiran tahay ilaha caadiga ah: waa midkoodna la soo dejiyey markii aad riixdid xiriirka 'waxyeellada'ama ku rakib faylka aad soo dejisay. Xaaladdan oo kale, trojan ayaa isku rakibaya iyada oo aan ogeysiis iyo oggalaansho - how to apply superannuation refund australia.
Julia Vashneva, Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamiisha Sare ,waxay siiyaan fikradda ah ka saarista dhamaystiran ee infekshankan dhibta leh.
Sida loo fahmo in wax aan sax ahayn:
Oggolaansho ayaa u muuqda mid xiisa leh
Waxaad arki doontaa feylka Trojan.Agent / Gen-VBKript ee faylashaada kombiyuutarkaaga.Intaa waxaa dheer, sheekooyinka cajiibka ah waxay bilaabaan inay muujiyaan miiskaaga
Haddii aanad ku dhejin karin baqshiitka difaaca furan ee macluumaadka deyntaiyo macluumaadka kale ee xasaasiga ah, markaa waxaad halis u tahay.
Xiriirinta internetka oo si fudud u xiran gaar ahaan isku xirka WiFi. HelitaankaInternetku wuxuu noqonayaa mid gaabis ah sida duufaan dabbaalan oo subag leh. Isku day in aad furto tab cusub, sameyso raadinta, waxna ma muujin.
Dabkaaga ayaa hoos u dhacaya, xarunta nabadgelyadana ma soo jeedin doonto
Inta badan kombuyuutarada waxay muujiyaan "dib u-soocelinta" / s-1-21 500/1000.
Diiwaanka waa la jabin karaa. Faylasha diiwaanka ayaa isbedelaya / tirtiray.
Ka boodboodo, faylka qoraalka ah (.txt) oo tilmaamaya in kombuyuutarku u socon doonocaadi ahaan ayaa sidoo kale muujinaya..
Codka Ghost. Halkan xayaysiin toos ah ayaa la ciyaari kara oo kaliya ma ogaan kartidka socota meesha
Waxaad ogaan doontaa in qaar ka mid ah calaamadaha leh .ini iyo kordhin kale oo qallafsanka muuqda mashiinkaaga.
Hababka Svchost.exe oo badan ayaa soconaya inta lagu jiro bilawga. Kuwani waxay qaadanayaan meel aad u badan.
Maqnaanshaha faylasha ee faylkaaga. Inta badan feyladan waxaa badanaa la qorsheeyaa in ay ku dhex ordaanmeel kale oo xasuusta ah.
Waxaa jira laba siyaabood oo aad ka takhalusi karto Trojan.Agent / Gen-VBRipt trojan.Waxaad sidoo kale samayn kartaa gacanta (taas oo qaadata xirfado) ama isticmaalka software.
Ka saarida trojan gacanta
Talaabada 1aad: Ku orda maamulaha hawsha:
saxaafad CTRl, SPACE, DEL buttons isku mar
daaqada hawsha ayaa furan
dooro nidaamka shakiga leh oo joojiya
Tallaabada 2aad: Aqoonsiga feylalaha xun ee isticmaalaya guddiga kantaroolka:
riix barta bilowga
xulasho guddi, muuqaal, iyo shakhsi ahaaneed
dooro 'doorashooyin guud'
riix 'aragtida,' 'sare', 'muujiyo faylasha qarsoon' kadibna ku dhameeysii 'jooji qarsoodi ilaalintafaylasha nidaamka hawlgalka
dhammeeya adigoo riixaya OK
Tillaabo 3: Furo Diiwaanka:
riix daaqadaha iyo R-roodhada isla markiiba
berrinka bannaan 'Regedit' ka dibna OK
raadi oo aqoonsadaan dhammaan faylasha shaki laga galo
Tallaabada 4aad: Dib u bilaabo kombiyuutarka:
Xulashada B: Isticmaalida barnaamijka si looga fogaado xajinta.
Xalka ugu fiican ee looga takhalusi karo taangiyadan waa adigoo isticmaalaya barnaamijka. SpyHunter 4: MalwareNabadgelyada Nabadgelyadu waa khadadkaaga ugu fiican. Waxaa la ogsoon yahay in laga ilaaliyo kombuyuutarrada khayaanada kala duwan. Waxay la timaadaa sida loo sameeyo hagaha.